Zvimwe Zvigadzirwa Fekitori | China Zvimwe Zvigadzirwa Vagadziri, Vatengesi
2019 Chinese Factory Surface Mount Ex-chiratidzo Lamp ye ...
Chengdu Taiyi IP65 ATEX Kuputika Zviratidzo LED Emergenc ...
Easy Kuisa Surface Yakatasva Kuputika-chiratidzo Le ...
ATEX LED Kuputika-chiratidzo Giredhi Exd IIB T4 IP66 LED S ...
75KW OEM Simbi Isina Kugadzira Magetsi Kambani Induction Burner Cooker
Iyo induction cooker, inozivikanwawo seye induction cooker, chigadzirwa chechigadzirwa chanhasi chekicheni. Izvo hazvidi yakavhurika murazvo kana conduction kudziyisa asi inobvumira kupisa kuti ibudiswe yakananga pazasi pehari, saka iko kupisa kwemafuta kwakagadziridzwa zvakanyanya. Iyo yepamusoro-inoshanda uye inochengetedza magetsi kicheni, iyo yakatosiyana kubva kune ese echinyakare kupisa kana isiri-moto conduction yekupisa kitchenware. Induction cooker chigadzirwa chemagetsi chekubika chinoitwa nenongedzo yemagetsi emagetsi induction kudziyisa. Iyo inoumbwa neiyo yepamusoro-frequency induction yekupisa makoiri (ekunyepedzera makoji), yakakwira-frequency simba ekushandura michina, ma controllers, uye ferromagnetic pot-pasi midziyo yekubikira. Kana iri kushandiswa, inochinjika yazvino inoendeswa mukoiri yekudziya, uye imwe yemagineti inogadziriswa inogadzirwa yakatenderedza coil. Mazhinji emagineti emitsara yemagineti anotsiva anodarika nemuviri wesimbi, uye huwandu hwakawanda hweeddy hwazvino inogadzirwa muzasi mehari, nokudaro ichigadzira kupisa kunodiwa pakubika. Iko hakuna mwenje wakashama panguva yekupisa, saka yakachengeteka uye ine hutsanana.
Sieving Calcium Carbonate yePetroleum Proppant Ceramsite Sand Vibrating Screen
Iwo ma alias eiyo vibrating skrini inonziwo: -atatu-matatu anozungunusa kuongorora firita-anotetemera hupfu muchina-anotenderera anotenderera screen-anodedera screen-anodedera screen-anodedera screen-round screen-circular vibrating screen. Uchishandisa chirevo chekugunun'una mota kukurudzira, izvo zvinhu zvinokandwa kumusoro pachiratidziro pamusoro, uye panguva imwe chete, inofamba ichienda kumberi munzira yakatwasuka kuti ifanane nechiratidziro zvine musoro kuti uwane chinangwa chekuongorora.
Iyo vhuvhu degasser chishandiso chakakosha chinoshandiswa kugadzirisa gasi yakanyudzwa kuchera mvura. Iyo inokodzera mhando dzese dzekutsigira michina uye inoita basa rakakosha kudzoreredza iyo yakakomba yedhaka, kudzikamisa iyo viscosity mashandiro ematope, uye kudzikisa mutengo wekuchera. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kushandiswa seyemagetsi-emagetsi agitator.
Impeller Dhiziri Dredger Sub Inonzwisisika Kuchera Sand Pombi Muchina
Sand pombi rudzi rwe centrifugal matope pombi, inoshandiswa kutakura kuturika ine jecha, slag, nezvimwe. Iyo impeller inonyanya kuvhurika. Iyo yekumira kwepombi inowanzo kuve yakakamurwa kuita mhando mbiri, yekupfeka-isingagadzirike simbi uye yekupfeka-isingagone rabha. Uye zvakare, jekesa mvura yakamanikidza-kupinda muchikamu chinotsvedza chepombi yekudzivirira matope nejecha kupinda muchikamu chinotsvedza. Rudzi urwu rwepombi runogona kushandiswa kuendesa zvinwiwa zvine zvakasindimara zvakaomarara zvine saizi yepamusoro pamusoro pe48 meshes.
Centrifuge muchina unoshandisa simba re centrifugal kupatsanura zvinwiwa zvine simba uye zvakaomarara kana chinhu chimwe nechimwe mumusanganiswa wemvura nemvura. Iyo centrifuge inonyanya kushandiswa kupatsanura solid solid mune kusimiswa kubva kune iyo mvura, kana kupatsanura izvo zviviri zvisingawirirane zvinwiwa muiyo emulsion ine kusiana kwakasiyana (semuenzaniso, kupatsanura kirimu kubva mumukaka); inogona zvakare kushandiswa kubvisa Liquid mune akanyorova solids, sekushandisa muchina wekuwachisa kutenderera yakaoma mvura nyoro; akasarudzika e-ultra-velocity chubhu akaparadzanisa anogona zvakare kupatsanura gasi musanganiswa weakasiyana matinji; shandisa hunhu hwehuwandu hwakasiyana kana hukuru hwesimba rakasimba mukati memvura kuti igadzikane pakumhanya kwakasiyana, uye imwe sedimentation Iyo centrifuge inogona zvakare kupatsanura yakasimba zvikamu maererano nehukuru kana chidimbu saizi.